November 2018 – Dental Clinic In Kathmandu
By admin • November 5, 2018 • No Comments
दाँत धेरै घोटेर सफा हुने होइन ! हामी धेरै चोटि सफा गर्दा दाँत सफा हुन्छ भनी ठान्छौँ । त्यो मात्रै एउटा मापक होइन । दिनमा दुई चोटि दाँत माझ्छु भन्नेको हामीले धेरै समस्या देखेका छौं । जस्तै धेरै घोटिएर गहिरो भाई जरा छोएको , गिंजा लाई घाऊ बनाइ माथि सारेको सफा हुनु पर्ने ठाउँमा सफा […]
यो तिहार देखी यि राम्रा बानी सुरु गुर्नुस् !
By admin • November 3, 2018 • No Comments
Dr Dinesh K Karki, A dentist in Kathmandu and DentalTemple Family ( Located in Old BANESWOR HEIGHT KATHMANDU ) bring forth useful things for all common people. यो तिहार देखी यि राम्रा बानी सुरु गुर्नुस् ! *** *** *** *** *** *** सस्तो खालको बुरुसले घोटी घोटी दाँत माझ्नु हुन्छ भने – राम्रो कम्पनिको (मेहेनत […]